Geeddi-socodka geeddi-socodka waxsoosaarka waxsoosaarka maqaarka oo dhammaystiran oo kaladuwan ayaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Warshadaha culus ee Henan Zheng. Waxaan khibrad u leenahay qorsheynta iyo adeegga khadadka wax soo saarka bacriminta ee kala duwan. Waxaan kaliya diirada saareynin xiriir kasta oo geedi socodka wax soo saarka ah, laakiin sidoo kale marwalba waxaan kufahmi karnaa faahfaahinta geeddi-socod kasta oo ku saabsan dhammaan qadka wax soo saarka oo si guul leh loogu guuleysto isku-xirnaanta. Waxaan ku siineynaa xalal wax soo saar dhameystiran oo la isku halleyn karo iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Khadka waxsoosaarka waxsoosaarka granulator waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro bacriminta isku dhafan. Guud ahaan, bacriminta isku dhafan waxay ka kooban tahay ugu yaraan laba ama seddex nafaqo (nitrogen, fosfooraska, potassium). Waxay leedahay astaamaha ku jira nafaqada sare iyo waxyeellooyin yar. Bacriminta isku dhafka ah ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa bacriminta isu dheelitiran. Kaliya ma hagaajin karto waxtarka bacrinta, laakiin sidoo kale waxay dhiirrigelinaysaa waxsoosaarka deggan ee sarreeya ee dalagyada. Khadka wax soo saarka ee granulator disk waa xalka wanaagsan ee lagu gaaro waxsoosaar tayo sare leh oo sareeya ee bacriminta isku dhafan. Khadka wax soo saarka wuxuu soo saari karaa bacriminta NPK, bacriminta DAP iyo qaybaha kale ee bacriminta.
Qalabka ceyriinka ah ee loo heli karo soo saarista bacriminta isku dhafan
Alaabta ceyriinka ah ee soo saarista bacriminta isku dhafan waa urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia dare, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, oo ay ku jiraan dhoobada qaar iyo kuwa kale ee buuxiyo.
Khadka wax soo saarka ee granulator diskka waa mid horumarsan, wax ku ool ah oo wax ku ool ah, qaab dhismeedka qalabka waa mid is haysta, otomatiggu wuu sarreeyaa, hawlgalku waa sahlan yahay, waana ku habboon yahay soosaarista dufcadda ee bacriminta isku dhafan.
1. Qalabka oo dhami wuxuu ka samaysan yahay walxaha u adkaysta daxalka iyo xirashada u adkaysta dharka.
2. Awoodda wax soosaarka waa la waafajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
3. Seddex wasakhda wasakhda qiiqa, tamarta keydinta iyo ilaalinta deegaanka. Waxay u socotaa si joogto ah waana sahlan tahay in la ilaaliyo.
4. Khadka soo saarista bacriminta isku dhafan ma soo saari karo oo keliya bacriminta isku-dhafka sare, dhexe iyo hoose, laakiin sidoo kale wuxuu soo saari karaa bacriminta dabiiciga ah, bacriminta aan dabiici ahayn, bacriminta noolaha, bacriminta birlabta, iwm.
5. Qaabka khadadka wax-soo-saarka oo dhami waa mid is haysta, saynis ah oo macquul ah, tiknoolajiyaduna waa mid horumarsan.
Qalabka xariijinta wax soo saarka ee granulator diskka waxaa ka mid ah maaddada bakhaarka → qas (isku qasan) → granulator disk (granulator) machine mashiinka shaandhada durbaanka (kala fogaanshaha alaabada aan tayada laheyn iyo alaabada la soo gabagabeeyay) suunka gudbiyaha (isku xirka habab kala duwan) iyo qalab kale Fiiro gaar ah: Khadkan wax soo saar waxaa loogu talagay oo kaliya.
Nidaamka socodka qadka wax soo saarka granulator disk waxaa badanaa loo qaybin karaa:
Ugu horreyntii, u qaybi alaabta ceeriin si adag saamiga. Qalabka ceyriinka ah waxaa ka mid ah urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium phosphate (ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium monophosphate, calcium carbonate), potassium chloride, potassium sulfate, iwm
Xagalka diskiga ee mashiinka granulation disk wuxuu qaataa qaab dhismeedka qaansoleyda, iyo heerka sameynta kubbadda ayaa gaari karta in ka badan 93%. Ka dib markay maadadu gasho saxanka granulation-ka, iyada oo loo marayo wareegga joogtada ah ee qalabka kala-baxa iyo qalabka lagu buufiyo, maaddada ayaa si siman isugu xidhan si loo soo saaro qurubyo leh qaab isku mid ah iyo qaab qurux badan. Disk granulator waa qalab lagama maarmaan u ah soo saarida bacriminta isku dhafan.
Baakadaha waa habka ugu dambeeya ee khadka soo saarista bacriminta xarunta. Shayga la dhammeeyay waxaa lagu xiraa mashiin baako buuxa oo otomaatig ah. Darajada sare ee otomaatiga iyo waxtarka sare ma aha oo kaliya inay gaaraan miisaam sax ah, laakiin sidoo kale si heer sare ah ayey u dhammaystiraan geedi socodka ugu dambeeya. Isticmaalayaasha ayaa xakameyn kara xawaaraha quudinta waxayna dejinayaan xuduudaha xawaaraha iyadoo loo eegayo shuruudaha dhabta ah.